महंगा उपकरण बेवारीसे NewsButwaltoday
श्रावण ३२ २०७६ | 2019 Aug 17 &nbsp
महंगा उपकरण बेवारीसे
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको अस्पतालमा आएका उपकरणहरु वेवारीसे अवस्थामा थन्किएका छन् । अस्पतालमा आएका ल्यावका उपकरण, डाईलासीस मेसीन, लास नगन्हाउने गरी राख्न प्रयोग गरीने उपकरण र कपडा धुने मेसीन अस्पताल वाहिर वेवारीसे अवस्थामा छन् ।
अस्पतालमा आवश्यक मेसीन खरीदगरी ल्याईएकोमा राख्ने ठाँउको अभाव भन्दै अस्पताल बाहिर अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ । अस्पताल परीसरमा वाहिर राखीएका उपकरणहरु सुरक्षीत नरहेको सजिलै देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी राप्ति उपक्षेत्रिय अस्पताल हुँदाका बखत आईसीयु सञ्चालनका लागि ल्याईएका उपकरणहरु पनि थन्काएर राखिएको छ । तत्कालीन अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन डा जनार्दन पन्थीका अनुसार उपक्षेत्रिय अस्पताल हुँदा आईसीयु सञ्चालनका लागि कामको सुरुवात भएको थियो । तर अहिले सम्म काम सम्पन्न नहुँदा उपकरणहरु थन्कीएका छन् । उपक्षेत्रिय अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीणत हुनुभन्दा पहिले देखी नै निर्माणाधिन भवनहरुको काम पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको जो कोहीले पनि सजिलै देख्न सक्छ । समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्पतालका लागि ल्याईएका महंगा उपकरणहरु प्रयोग विहिन अवस्थामा अस्पताल वाहिरै थन्किएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले प्रत्याभुत गरेको लक्षित वर्गको निशुल्क उपचार सेवा पनि नपाएको भर्ना भएका विरामीहरुले बताएका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका लालबहादुर घर्ति (७२)ले जेष्ठ नागरीकको निशुल्क उपचार नपाएको गुनासो गरे । चार दिन देखी अस्पतालको वेडमा रहेका घर्तिले निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने सुनेको भएपनि अस्पतालवाट सेवा नपाएको बताए । रोल्पा माडि गाँउपालीका निवासी घर्ति मुटुका रोगी हुन् । अस्पतालमा जेष्ठ नागरीक भएको प्रमाणहरु आफुसंग भएपनि कसैले वास्ता नगरेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी पोषण पुर्नस्थापना गृहलाई डाक्टर निवास बनाएको प्रतिष्ठानले अस्पताल भित्रै सञ्चालन गरेको दावि गरेपनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ । प्रतिष्ठानले छुट्याएको पोषण पुनस्थापना कोठा अहिले ताला लगाएको अवस्थामा रहेको छ । उक्त कोठा भित्र बच्चाले खेलाउने कुराहरु र केही वेडहरु मात्र रहेको देख्न सकिन्छ । तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने अहिले उक्त ठाँउवाट अर्को कोठामा पोषण पुर्नस्थापनाको काम भैरहेको दावि गरेको छ ।
अस्पतालमा अहिले सातामा २२ जना विरामीको डाईलासीस भैरहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । डाईलासीस गर्ने विरामीको संख्या धेरै नै भएपनि उपकरण र डाक्टरको अभावमा सेवा दिन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । त्यसैगरी लामो समयपछि अहिले एसएनसीसी (तापक्रम मिलाएर डाक्टरको प्रत्येक्ष निगरानीमा उपचार गरीने कक्ष) सञ्चालनमा आएको छ । तर अहिले विरामी बच्चा भने नरहेको नर्स पुष्पा गिरीले जानकारी दिईन् । गत पुस देखी सञ्चालनमा आएको उक्त कक्षमा एकै पटकमा ६ वटा वच्चालाई उपचार गर्न सकिने उनले जानकारी दिईन् । हिजो सम्म एउटा बच्चा थियो तर आज छैन गीरीले भनिन् । अहिले अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विरामीको संख्यामा निकै कमी आएको अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानमा भए लगत्तै उत्पन्न भएको किचलोले अस्पताल प्रतिको विश्वास गुमाएका कारण उपचार गराउन आउने विरामीको संख्यामा कमी आएको हो ।
अपडेट : 2019-04-01 08:23:44
रुरु पूर्ण विद्यालय भर्ना गाउँपालिका
‘विद्यालयमा मेरो एक दिन’
बीस बर्ष मुनिका चारसय गर्भवती !
उत्पादनमा प्राथमिकता, लोकप्रिय कार्यक्रमको निरन्तरता
धुलो सडक छलेर कसरी जाने लुम्बिनी ?
लुम्बिनी घुम्न आउनु है